युएईका जेलमा ६३ जना नेपाली, हत्या देखी पार्कमा जोडीएका सम्म! - Arghakhanchi Saptahik
युएईका जेलमा ६३ जना नेपाली, हत्या देखी पार्कमा जोडीएका सम्म!
मंसिर १६ – युएईमा ६३ जना जना नेपाली जेलमा छन् । विभिन्न कारणले जेल जीवन बिताइरहेका नेपालीको अवस्थाबारे बुझ्न यहाँका सबै जेलमा पुगेर नेपाली दूतावासले तयार पारेको प्रतिवेदनमा यो विवरण उल्लेख छ। दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पठाएको प्रतिवेदनमा १० जना नेपाली आममाफी पाएर नेपाल फर्कन लागेको उल्लेख गरिएको छ । उनीहरुलाई विभिन्न अवसरमा युएईले आममाफी दिएको हो । फर्कन लागेकामध्ये तीन महिला र सात जना पुरुष छन् ।
युएईको दुवई, सारजाह, आबुधाबी, रसअलखेमा, उम्मलक्विन फुजेराह र अलऐनमा रहेका जेल पुगेर दूतावासका प्रतिनिधीले नेपाली कामदारको अवस्था र मुद्दाको अध्ययन गरेको थियो । साथै स्थानीय प्रशाशनका उच्च अधिकारी र ती नेपालीहरुले काम गरेका कम्पनीका प्रतिनिधिसँग समेत भेटघाट गरेको द्वितिय सचिव कृष्ण अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।
भेटमा नेपाली कामदारलाई परेको मुद्दा र त्यसबारे गर्न सकिने समन्वयका लागि दूतावासले चासो देखाएको हो । यसअघि दूतावासको समन्वय र एनआरएनलगायत अन्य संघसस्थाले दुवईका केही जेलमा पुगेर त्यहाँ रहेका नेपालीको अवस्था बुझ्दै आएका थिए । तर यहाँ रहेका सम्पूर्ण जेलमा दूतावासका प्रतिनिधी पुगेको यो दोश्रो पटक हो । नियमित रुपमा यहाँका जेल पुगेर कैदी जीवन बिताइरहेका रहेका नेपालीको अवस्थाबारे परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकारलाई जानकारी गराउने दूतावासको भनाई छ ।
कुन जेलमा कति नेपाली ? युएईको दुवईको सेन्ट्रल जेल अल अविरमा दुई महिलासहित ३२ जना नेपाली छन् । आबुधाबीको अल वात्वा जेलमा एक महिला र १८ पुरुष गरेर सहित १९ जना नेपालीले कैदी जीवन बिताइरहेका छन् । त्यस्तै सारजाहको जेलमा ५ जना महिला र एक पुरुष गरी ६ जना छन् भने अलऐन जेलमा एक महिला र दुई जना पुरुष गरेर तीन जना नेपाली छन । त्यस्तै रसअलखेमा, फुजेराह उम्मलक्विन र अजमानमा तीन जना नेपाली जेल जीवन बिताइरहेका छन् । यी जेलमा रहेका नेपालीसँग भेट्न दूतावासले द्वितिय सचिव कृष्ण अर्याललाई पठाएको थियो ।
रक्सी पिएर झै झगडा गर्ने बढे
जेलमा रहेका अधिकांश नेपाली रक्सी पिएर झैझगडा गर्ने र झगडाले उग्र रुप लिँदा कुटपिटसम्म भएर कारगारमा पुगेका हुन । ४३ प्रतिशत कैदी रक्सीकै कारण जेल जीवन बिताइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।झैझगडा गर्ने देखी कुटपिट गर्ने, रक्सी पिएर गाडी चलाउने जस्ता कार्यमा संलग्न भएको आरोपमा २७ जना नेपाली जेलमा छन । कतिपयले त साप्ताहिक बिदाका दिन पेप्सी र कोकाकोलाका बोतलमा रक्सी राखेर पार्क तथा समुन्द्र किनारमा बसेर पिएको अवस्थामा समेत भेटिएका हुन । सार्वजनिक स्थानमा रक्सी पिउनु युएईको कानुन विपरितको काम हो । ‘दूतावासको प्रतिनिधि भएर जेल पुग्दा लज्जित हुनु पर्ने अवस्था छ ।’ द्वितिय सचिव अर्यालले भन्नुभयो ‘जेलमा नेपालीको अर्को नाम नै रक्सी पिउने र कुटपिटमा उत्रिने हिसावले परिचित छ । यस्ता कुरामा नेपाली कामदार सचेत नभए समस्या विकराल हुँदै जाने देखिन्छ ।’
भाङ, धतुरो र मर्चा बोकेको आरोपमा पनि जेल
हत्या आरोपमा १० नेपाली जेलमा छन । १६ प्रतिशत कैदी यही समस्याका कारण जेलमा छन । उनीहरुको बिषय थप जटिल हुने भएकाले रिहाइ हुन समय लाग्छ । त्यस्तै जेलमा रहेका आठ जना लागु औषध ओसारपोसारमा संलग्न भएको आरोपमा जेल परेका हुन् ।धेरैजसो नेपालीले नेपालबाट अचारमा भाङ, धतुरो गाजा तथा मर्चा मिसाएर ल्याउने क्रममा प्रकाउ पर्ने गरेका छन । त्यस्तै चोरी आरोपमा ७ जना र अवैध यौन सम्बन्ध राखेको आरोपमा पाँच जना नेपाली जेलमा छन् । उनीहरुलाई पार्क तथा विभिन्न स्थानमा बसेर शारीरिक सम्बन्ध राख्ने प्रयास गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएको हो । नक्कली कागजपत्र बनाएर प्रयोग गरेका कारण दुई र अन्य कारणले तीन जना नेपाली जेलमा छन् । उमाकान्त पाण्डे